Uyivula njani i-Dispensary engaphantsi kweedola ezingama-50.
Uyivula njani i-dispensary kumazwe amaninzi ngaphantsi kweedola ezingama-50.
Kwinkoliso yamazwe ukuvula indawo yokuthengisa intsangu kuxabisa ngaphezulu kwesigidi esinye seedola ukuze ucango luvuleke ngenxa yemirhumo ebiza kakhulu yokufumana iilayisensi, iimfuno zokhuseleko, iifizi zerhafu yempahla, uluhlu lweemveliso kunye nabasebenzi. Kukho amabali amaninzi evenkile zikamama kunye nee pops ezazikhutshelwe ngaphandle kolu rhwebo lutsha ngenxa yeenkampani ezixhaswe zizigidi zeedola ezingenayo kwaye zahlawula ukuya kuthi ga kwi-1 yeedola ukuya ISICELO! Nangona kunjalo enkosi kumthetho oyilwayo wefama ka-2019 ungavula eyakho i-hemp IDelta 8 THC izibonelelo zisuka ekhayeni lakho zangaphantsi kwe- $ 50 yeedola kusetyenziswa iNkqubo eBumbeneyo yokuDibana.
Isicwangciso sethu soShishino lweZibonelelo ezilula
IDelta 8 THC yenye yeenkulungwane zamachiza avela kwisityalo se-hemp, kodwa ngokungafaniyo ne-CBD, i-CBG, kunye ne-CBD, eli qela likunika ukufana okuphezulu kwe-Delta 9 THC ethathwe kwisityalo se-cannabis esadweliswa kwishedyuli 1 urhulumente wobumbano. Ngenxa yetyala lasefama, uvunyelwe ngokusemthethweni ukuba uthengise IDelta 8 THC iimveliso njengoko uvumelekile ukuba uthengise iimveliso ze-CBD, ngaphandle kokuba ilizwe lakho lenze iDelta 8 THC engekho mthethweni ezinye. Nangona kunjalo, njengomthengisi obambiseneyo, usengathengisa kubahlobo kunye nosapho kumazwe asemthethweni, nokuba uhlala kwilizwe elingavumelekanga okanye cha. Ungaqala ngeemveliso ezimbalwa kwaye uzithengise kubahlobo bakho kwaye ukhule ukusuka apho!
Inqanaba 1 kwi-Intanethi kuphela Isicwangciso sokubonelela ngeendleko zokuqalisa $ 49.00
Iidola ezingama-49.00 kuphela onokuqala ukufumana imali kwimidiya yoluntu nakwi-intanethi ngokuxelela abahlobo bakho kunye nabalandeli nge-CBD kunye ne-Delta 8 THC iimveliso Ufumana ikhonkco lokudibana elilandelwa yiwebhusayithi yethu kwaye nanini na kukho ukuthengwa ufumana i-% 10 Ipesenti yexabiso lilonke lokuthengisa. Unokufumana abanye abahlobo, amalungu osapho, kunye nabalandeli ukuba bajoyine inkqubo yokubambisana kwaye ufumana iikhomishini ezili-10 zento yonke abathengisayo.
Inqanaba 2 IsiCwangciso sokuSasazwa kweShishini esekwe kwiNdleko yokuQala kwexabiso lama- $ 249.00
Oku kubandakanya konke okungasentla, kunye
I-1 Delta 8 THC iCartridge elahlwayo 15 49.99
1 Delta 8 THC uMlawuli oBomvu weGummies 49.99
Ibhotile ye-1 ye-MG ye-CBD eyi-1000 yeendleko zam 49.99
Unyango lwe-1 Inja ye-CBD 29.99
I-CBD yeCream yokuGuga eguga 59.99
1 Ukuqaqanjelwa kwe-Gel yokuNceda i-Gel Roll-On 39.99
Ixabiso lilonke $ 344.92
Esi sicwangciso sesabo bafuna ukwenza imali nangakumbi ngokuthengisa ngokuthe ngqo kubahlobo babo nakumalungu osapho. Bangaphi abantu obaziyo abathanda i-cannabis kwaye baziqondayo izibonelelo ze-CBD?
Uyakufumana kwakhona kuluhlu lwethu lwamaxabiso apheleleyo apho endaweni yokwenza ikomishini yeepesenti ezili-10 kwintengiso nganye oyenzayo naphi na ukusuka kuma-20 ukuya kuma-50 epesenti yeekomishini ngentengiso nganye ngokuthe ngqo. Kwaye ngaphezulu kwayo nayiphi na intengiso ye-Intanethi, uyenza ngokwakho okanye kumahlakani akho.
Yimalini onokuyizuza usebenzisa iNkqubo yokuDibana neDispensary?
Inani labaNxulumene Ukuthengisa ngeNyanga nganye Intengiso iyonke Ukufumana umvuzo ngenyanga nganye
40 $ 2,500.00 $ 100,000.00, $ 5,000.00
50 $ 2,500.00 $ 125,000.00, $ 6,250.00
20 $ 5,000.00 $ 100,000.00, $ 5,000.00
30 $ 5,000.00 $ 150,000.00, $ 7,500.00
40 $ 5,000.00 $ 200,000.00, $ 10,000.00
50 $ 5,000.00 $ 250,000.00, $ 12,500.00
Ezo zinokubonakala ngathi ziinjongo eziphakamileyo kodwa khumbula umndilili wokuzonwabisa wokuhambisa intsangu kwisixeko esiphakathi senza umndilili wesigidi ngenyanga kwintengiso. Yabona https://www.502data.com/
Idolophu yaseWashington State ephezulu yokuHanjiswa kweMarijuana ngeNtengiso yenyanga
Isigaba 3 KwiWebhusayithi yakho yeBrand kunye neeVenkile zeHempical
Umthetho we-Federal Marijuana ulungile kwikona, kwaye ngoku li-1 kwisithuba seminyaka eli-100 sokuqala uphawu lwakho kwaye ungene kumashishini amatsha anomdla, kwaye anenzuzo enkulu. I-Canada isemthethweni ngokusemthethweni kwaye iMexico isandula ukumisa intsangu kwinqanaba lomdibaniso yinto nje yexesha ngaphambi kokuba i-United States yenze kwa into enye. Phakathi, sikwi ndawo emnandi kunye ne-Delta 8 THC kunye ne-CBD. Kuba uninzi lwamazwe aluyibhalisanga ngokusemthethweni intsangu yolonwabo efana neTexas, Florida, North Carolina, Alabama abavunyelwe ukuthenga ngokusemthethweni intsangu rhoqo kwaye banokuzifaka entolongweni, izohlwayo, kunye nokulahleka kwabantwana. Hayi nge-Delta 8 THC, ukuba abayibeki indawo yokuvalwa ngumthetho ziipesenti ezili-100 ngokusemthethweni ukuthengisa izinto, kwaye usebenzise i-CBD NJENGOKO i-CBD ingaphantsi kwe-0.3 yepesenti ye-Delta 9 THC. Oku kuthetha ukuba unokuvula ivenkile ye-hemp eTexas kwaye uqalise ukuthengisa ngokusemthethweni i-CBD THC iimveliso ze-8 & 10 namhlanje. Amawakawaka osomashishini enza into efanayo kulo lonke ilizwe ngoku. Bona: https://journalstar.com/news/local/crime-and-courts/theyre-not-doing-anything-illegal-lincoln-police-not-concerned-with-delta-8/article_3086ad5e-dc10-59cd-88cc-0f72cc67018b.html
I-CBD kunye ne-Delta 8 Dispensaries ziyavulwa kwilizwe liphela. Qala ngoku!
Xa unevenkile yakho uya kuba nakho ukufikelela kwizaphulelo zevolum eninzi eziza kukunika umda ophakamileyo wengeniso, kwaye kunye nale nkqubo, ungaqala uhlobo lwakho lweemveliso ze-CBD ngewebhusayithi yakho onokuthengisa iimveliso ebantwini. kwilizwe liphela. Akukho ndleko zongezelelweyo zokuqalisa kwesi sicwangciso thenga nje iimveliso ezininzi njengoko ufuna kwiphepha lethu levenkile.
Inqanaba 5 KwiWebhusayithi yakho yeBrand kunye nakwiVenkile yePhysical
Funda ngakumbi ngeZicwangciso zethu
Qalisa ishishini lakho ngeemveliso zakho ezinombhalo omhlophe kwivenkile yakho ekwi-Intanethi. Yenza uMarko wakho kwiShishini elilandelayo leBillion Dollar.
I-DIY + iDropShip
Imali eyi- $ 220 yokuSeta ixesha elinye
Faka ilebheli emhlophe kwiimveliso zakho
Sikubonelela ngoluhlu lwakho
Ukuzaliseka kunye nokuHanjiswa
IQonga lokuKhangela uMkhondo
Ivenkile ye-CBD yangoku
Imali eyi- $ 599 yokuSeta ixesha elinye
Sakha Ivenkile yakho ekwi-Intanethi
Iqonga lokuThengisa eliDibeneyo
Imali eyi- $ 1250 yokuSeta ixesha elinye
Iplatifomu yamaxabiso eVenkile
Ukusebenza ngokuzenzekelayo kwenqanawa
Ingxoxo yewijethi ebukhoma
Ixabiso eliphantsi lempahla
Imida yeNzuzo ePhakamileyo
NDINOKUFUNDA KANGAKANANI KWINTENGISO NGAMNYE?
Uya kufumana isabelo sakho senzuzo kuyo yonke intengiso. Uninzi lwabathengi abathenga i-CBD bachitha umndilili ongaphezulu kwe- $ 120, bakunika ikhomishini phakathi kwe- $ 60 ukuya kwi-70 yeedola. Nangona kunjalo, unokuseta amaxabiso akho kwaye wenze umahluko phakathi kwexabiso lakho lempahla kunye nexabiso lakho lokuthengisa.
Ngaba le yinkqubo ye-MLM?
Hayi, i-CBDStartup.io ayibandakanyi kuzo naziphi na iindlela zentengiso zamanqanaba amaninzi zentengiso ethe ngqo. Asithathi nxaxheba kwiinkqubo zokuwisa; Zonke iikhomishini zisekwe kwintengiso yokwenyani evela kubathengi bakho.
INGABA NDILANDELELA IMIYALELO?
Hayi, yonke into ishishini kunye nokuzaliseka okunxulumene nayo kwenziwa sithi. Ujoliso lwakho kuphela kukuqhuba abathengi kwivenkile yakho ekwi-intanethi. Siphatha ukuqhubekeka, ukuhambisa, iirhafu kunye neentlawulo. Akunakufumana lula kuwe.
INKQUBO YOKWAMKELWA ITHABA IXESHA ELINGAKANANI?
Siphonononga zonke izicelo zokudibana ezintsha ngaphakathi kosuku lwe-1 lweshishini. Qiniseka ukuba ubandakanya yeyiphi iwebhusayithi okanye iindlela zorhwebo oceba ukuzisebenzisa kwifom yesicelo, ukuze ufumane imvume ekhawulezileyo. Siza kukuthumelela i-imeyile eyamkelekileyo kunye nemiyalelo kwakamsinya nje ukuba isicelo sokudibana senziwe kwaye samkelwe.
Intlawulo iya kwenziwa ngokudluliselwa kwebhanki okanye ujonge kwiakhawunti yakho ebonelelwe kwi-ofisi yakho yangasemva, kwimali yase-US. Ukuthengiswa okwenziwe nge-1-15 kuya kuhlawulwa ngomhla we-16. Ukuthengisa ukusuka nge-16-31 kuya kuhlawulwa ngomhla wokuqala.
NGABA NDIKUTHUMELA ABATYELELI?
Hayi, iinkqubo zethu azifani nenkqubo yokudibana phaya. Uya kufumana iwebhusayithi yakho kwintengiso. Iqonga lethu libandakanya iimveliso zakho zelebheli elimhlophe. Ke uyakuthengisa iwebhusayithi yakho kunye neemveliso zakho ze-CBD.
NDILANDELA NJANI OKO NDIKUFUNDILEYO?
Sinikezela ngamanani exesha lokwenyani kwintengiso kwideshibhodi yakho yolawulo. Ngena ngokulula kwiwebhusayithi yakho kwaye ujonge ukuthengisa kunye neenkcukacha zolwazi kwideshibhodi yakho kwaye uya kuba nakho ukubona iodolo nganye, umthengi, ikhomishini efumene nokunye okuninzi…
INGABE UNOMGAQO-NKQUBO WE-IMEYILI?
Ukuthumela i-imeyile yalo naluphi na uhlobo kwabo bangakhange bacele ii-imeyile kwaziwa njenge-SPAM. Asivumeli naluphi na uhlobo lwe-imeyile okanye iqela leendaba eligaxekileyo. Sifaka uluhlu lwee-imeyile ezingakhethiyo kwinkcazo yethu yespam spamming. Ukuba sifumanisa ukuba naziphi na iiakhawunti zokubandakanyeka ziyabandakanyeka kwi-imeyile okanye kuluhlu lweqela lezintengiso ezingacelwanga, siya kuyivala iakhawunti kwaye siyilahle yonke ingeniso yekhomishini esalindelweyo. Sikhuthaza abo sinxulumana nabo ukuba basebenzise nayiphi na indlela yentengiso kwi-Intanethi abanqwenela ukuyisebenzisa, ngaphandle kwe-imeyile eninzi kunye neqela leendaba.